eNasha.com - लोला हान्ने ? सोच्नुस् है !
लोला हान्ने ? सोच्नुस् है !
कुरा हिजोको मात्र हो । मिस नेपाल २००७ की सहभागी ममता प्रधान हिजो दिउँसो तालीम कार्यक्रममा भाग लिन पुतलीसडकबाट कार्यक्रमस्थलतिर जाँदै थिइन् । होली लाग्नुअघि लोलाको बोलवाला भएको बेला राम्री केटीलाई हानुँहानुँ लागेर होला केही केटाहरुले ममतालाई लोलाले हानिदिए । चिटिक्क परेर हिँडेकी ममतालाई त्यसै त मीस नेपाल कार्यक्रमको तनावले तताएको त्यसमाथि पनि लोलाले हिर्काउँदा उनको कन्सिरी तात्यो । त्यसपछि जे भयो, त्यो चाहिँ लोलावालाहरुले सोच्नैपर्ने किसिमको घटना थियो ।
ममताले लोला हान्ने युवालाई बेस्कन गाली गरिन् । उनको गाली सुनेर वरपरका केही व्यक्ति जम्मा भए । ती व्यक्तिलाई उनले आफू कुनै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा जान लागेको तर लोलाका कारण आफूले त्यो कार्यक्रम छुट्न सक्ने बताइन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा राम्रो बनेरै जानुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुको लोलाले आफ्नो 'प्रदर्शन' खराब हुनसक्ने कुरा बताइन् । त्यसपछि त के थियो र ! भएभरका व्यक्तिहरुले उनमाथि गरिएको अन्यायको विरोध मात्र गरेनन् उनीसँग माफी पनि माग्नुपर्ने स्थिति भयो ।
लोला हान्नेहरुले नजिकैको 'टेलर'मा गएर ममताको कपडामा आइरन लगाएर सुकाइदिए र त्यसपछि आफूले गरेको कामप्रति माफी पनि मागे । कतै तपाइँले पनि काममा हिँडिरहेको व्यक्तिहरुलाई लोला हान्ने योजना बनाई त रहनु भएको छैन । यदि छ भने यो घटनाबाट पनि पाठ सिक्ने हो कि !
festival streets awards माओवादी संविधानसभा पेट्रोल हल्ला मोबाईल सेलेब्रिटी अनुभव समलिङगी hi-life crisis events celebrity